Hugaanka Sucuudi Carabiya oo markale Ceeb weheshaneya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Hugaanka Sucuudi Carabiya oo markale Ceeb weheshaneya
Hugaanka Sucuudi Carabiya oo markale Ceeb weheshaneya
Xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii xaqiijiyey sax ahaanshaha hadalada la daabacay ee khabiirka madaxa banaan ee hogaaminayey baaritaanka dilkii saxafiga Jamal Khashoggi ayaa ku andacoonaya in sarkaal sare oo sacuudiga ah uu hanjabaad ka dhan ah iyada u jeediyey.
Wargeyska The Guardian ayaa Talaadadii soo xigtay Agnes Callamard, oo ah khabiirka Qaramada Midoobay ee dilalka kooban, iyada oo leh sarkaal Sacuudi ah ayaa ku hanjabay in “la idileyo” haddii aan dib ugu joogsan baaritaanka ay ku hayso dilka saxafiga.
‘Waxay ahayd hanjabaad aan layaabey ayey tiri: Agnes Callamard oo iga soo wajahday Baaritaanka aan ku haayo ku kiiska dilka Khashoggi.
Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa waxaa ay kunoqotey Dilkii Wariye Jamaal ka shoqji Cudur aan Dilaa ah oo Dunida oo idil Dawo looga waayey,Sida Karoona Feyrus.
Waa hubaal hadii in Sucuudigu Maanta ay Ku dhaqaaqi lahaayeen hadii ay ogyihiin halka ay joogto Ruuxda Jamaal ka shqoji in ay Xitaa isku dayi lahaayeen in ay Maaligta ka sooxadaan marka loo eego Culeyska ay arintaani ku hayso oo kaga imaaneya US& EU.
Saraakiisha Sacuudiga kama aysan jawaabin codsi ay uga dhiibteen arrintan. Sida oo Saraakiisha Sucuudiga ka aaney jawaabin kadib markii ay la soo xiriireen wakaaladda wararka ee Reuters.
“Waxaan xaqiijineynaa in faahfaahinta ku jirta sheekada Guardian ee ku saabsan hanjabaada loo jeedinayo Agnes Callamard ay tahay mid sax ah,” afhayeenka xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Rupert Colville ayaa ku yiri email uu u qoray Reuters.
Xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Callamard ku wargaliyay hanjabaada marka lagu daro warbixin siinta amaanka iyo maamulada Qaramada Midoobay, ayuu raaciyay, Afhyeenku haalkiisa.
Previous articleFarmaajo oo subaxii hore ku soi dheelmaday Teendhada afisiyoone si uu u baahiyo kulanka 5 Maamul Goboleyd
Next articleSargaal ka tirsan Dowlada oo Qaraxmina lagu qaarajiyey magaalada Muqdiaho
Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump oo lagu tilmaamay Madaxweynihii ugu...
Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump, waxaa inta badan lagu eedeyn jiray in uusan runta qaddarin jirin. Sidaasoo ay tahayna qaar ka mid ah...
Xildhibaanada Sanatoorada ee waji gabax kala kulmay kulankii Baarlamaanka ee...
Beesha Caalamka oo war Jilicsan ka soo saartay arimaha Soomaliya
Dadaalo ay wadaan xubaha beesha Caalamka, oo la isugu soo dhaweynayo...
War deg deg ah Waxaa goordhaw lagu laayay Suuqa bakaaraha ciidanka...